Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Bernardo Silva Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara;'Little Messi'. Anyị Bernardo Silva Ụmụaka Akụkọ na akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu.
Ee, onye ọ bụla mara banyere ike Bernardo Silva nwere ike ịrụ ọrụ kama ọ bụ mmadụ ole na ole na-atụle ndụ ya n'èzí pitch nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka ịmalite.
Bernardo Silva Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Ndụ mbido
A mụrụ Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva na 10th nke August, 1994 na Lisbon, Portugal ka Mota Veiga Silva (nna) na Maria João Silva (nne).
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ọ tolitere na-akwado Benfica. Ọ bụ ihe na-egbukepụ egbuke egbuke na IQ dị elu. Omume ya na ịrụsi ọrụ ike bụ njirimara maka ebe ọ nọ taa n'ụwa football.
Ọ malitere ọrụ ịgba chaa chaa ruo afọ asatọ ma mechaa nwee ọganihu site na usoro ntorobịa tupu ya emee ihe mbụ maka Benfica B na nke abụọ nke football football na 2013. A kpọrọ Bernardo 'Messizinho ' na 'Little Messi' n'ihi nnukwu talent ya.
Bernardo Silva Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Jorge Mendes bụ onye na-elekọta ya
Bernardo bụ onye na-azụ ahịa n'ụwa nile bụ Jorge Paulo Agostinho Mendes. Mendes bụ otu n'ime ndị na-enwetakarị ndị uwe ojii n'ụwa, ndị ahịa tinyere Cristiano Ronaldo, David de Gea, Diego Costa, James Rodríguez, Marcos Rojo na José Mourinho. A na-akpọkarị ya dị ka a "Oke-ụlọ ọrụ".
Aha ya Onye kachasị mma nke afọ na Globe Soccer Awards ugboro isii, site na 2010 ruo 2015. Mendes malitere dị ka ụmụ amaala ma a manyere ya ịhapụ olileanya ya maka ọrụ ọkachamara mgbe ọtụtụ ndị Portuguese klọb jụrụ ya mgbe ọ nọ n'oge 20s mbụ ya. Kama nke ahụ, ọ gbagara ụlọ ahịa vidio vidio, rụọ ọrụ dịka DJ ma meghee ụlọ mmanya na ụlọ nkwari egwu na Caminha, obodo dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ Portugal.
Ọtụtụ kwenyere na onye na-egwu egwu ga-esonyere Manchester United mgbe ọ hapụrụ Monaco, n'ihi njikọ ya na 'nnukwu onye ọrụ' Jorge Mendes - onye nwere njikwa Jose Mourinho dịka otu n'ime ndị ahịa ya. Guardiola meriri agha ahụ maka onye kpaliri ya n'oge ọnwụ nke 5-3 na Monaco na mbụ ụkwụ nke Njikọ Njikọ Njikọ nke ikpeazụ na nke ikpeazụ.
Bernardo Silva Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Ozugbo a kwụsịrị
Jorge Jesus nke Benfica nwetara nnukwu ihe na ya club. Ma ruo taa, ndị na-agba eto ụlọ ahụ nọgidere na-akatọ enweghị okwukwe ya na nkà nke ụlọ, na Bernardo Silva na-atụghị anya ya dịka ihe nlereanya kacha mma.
O kweghị na onye na-egwu egwuregwu. Ruo oge ụfọdụ, Jorge Jesus kwere Bernardo ka ọ bụrụ nanị minit 31 karịa egwuregwu atọ maka otu ìgwè mbụ nke Benfica. Bernardo Silva n'onwe ya kwetara na n'okpuru Jisos 'enweghi olileanya ichoputa ndi isi oche nke Benfica', sị: "Mgbe Jorge nyere m ọzụzụ na azụ azụ na Benfica, achọpụtara m na agaghị m enwe ọganihu n'ọgbọ egwuregwu ahụ."
Benfica bụ osisi Bernardo nke nwere obi ụtọ. N'ihi ya, ọ dị ya n'obi na o nwere motto ha 'Ekebeghi otu' na-egbu egbu na aka ekpe ya. Ọ bụ Jorge Jesus gbawara nrọ ya na ha.
Bernardo Silva Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Aha yiri nke ahụ, Ụdị Onye ahụ, Ezi Ndị Enyi
Onye na-egwu egwuregwu ahụ hụrụ mgbe ọ bịarutere n'obodo na ọ gaghị abụ naanị Silva na ndị otu. Ha abụọ ghọrọ enyi kachasị mma mgbe ha hụrụ na ha na-eketakwa aha na àgwà na àgwà ndị ahụ na pitch. Ha abụọ nwere ụkwụ aka ekpe, anya maka njem ahụ, ebe dị elu nke ike ndọda na ikike ịdọkpụ aka nke na-egbochi mmechi mmegide.
Bernardo Silva Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Ụra na ọgụgụ isi
Bernardo Silva na-etinye oge na-edina n'ala na anya mechiri maka ihe dị ka otu awa mgbe mmega ọzụzụ ọ bụla. Ịkwalite ikike iche echiche gị ma bụrụ maka ọrụ ọgụgụ isi ya na pitch. Nke a na - eme ka ọ bụrụ otu n'ime ụkwụ ndị nwere ọgụgụ isi n'ụwa. A na-ahụkwa ọgụgụ isi ya na azịza ya na echebara echiche na ndị na-ede akụkọ.
Bernardo Silva egosila na ndị otu obodo ibe ya nwere ike ime mgbanwe maka mba ọhụrụ, asụsụ ọhụrụ na omenala ọhụrụ. A na-eji ya agagharị na mwepụ. Ịgba ọsọ ngwa ngwa na France mgbe ọ dị obere nyere ya aka ịzụlite dị ka mmadụ.
Ọ na-atụ anya na ọ mụtara asụsụ Bekee tupu ọ rọọ nrọ ịbịa England. Bernardo nwere ọgụgụ isi na ọdịdị ụra mgbe ọ na-enye ya ikike iche echiche banyere mkpa ya, ya mere, "Mee hay ka anyanwụ na-enwu".
Bernardo Silva Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Njikọ 1 Player nke Afọ 2016-2017
Ọ ghaghị ịbụ Silva, ma megide Edinson Cavani, bụ onye weputara aha Ligue 1 Player nke Year, ma nye Monaco ọtụtụ kpakpando, ọ ga-abụrịrị na ekewapụtara votu ha. Nke a bụ ihe ọmụma si mgbaru ọsọ.
N'ime ndị niile na-egwu egwu na mpaghara France nke dị n'ebe ndịda n'oge a, ọ bụ ezie na ọ bụ Portuguese nke kachasị dịrịgide n'oge a.
Onye ya na ya na-akpakọrịta Fabinho kwupụtara na February, 2017: "Ọ bụ ma eleghị anya onye kasị mkpa so n'òtù ahụ. E jiri ya tụnyere ndị dị ka Radamel Falcao na Kylian Mbappe, a ga-eleghara onyinye ya anya n'ụzọ dị mfe. A sị ka e kwuwe, ọ bụghị onye na-egwu egwuregwu na-atụ egwu. N'otu aka ahụ, ọ naghị enye swagger, mgbawa ma ọ bụ ike nke mmasị Benjamin Mendy ma ọ bụ Tiemoue Bakayoko. Mgbe m rutere Monaco na 2014, amaghị m na ọ ga-aga dị ka nke a. N'ezie, ọ bịara dị ka onye a na-amaghị na France. Enwere m ike karịa na ha debanyere ya aka mgbe ọ bụla otu egwuregwu na Benfica nọ na ya. Taa, ọ ghọwo ihe ọzọ.
Bernardo Silva Child Story Plus Ihe Na - emeghị Ihe Ọ Bụla -Ọ na-adị ukwuu ruo mgbe ebighị ebi nye Jardim
Bernardo Silva kwetara na o ji ụgwọ dị ukwuu Leonardo Jardim onye dị ka nna ya karịa onye bụbu onye nlezi.
N'okwu ya... "Onwe m, Jardim enyewo m ọtụtụ," Bernardo Silva kwadoro. "Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ndị na-eto eto. Ọ hụrụ na m bụ nwata ma nye m ohere. N'isi m, enwere m mmetụta dị iche. Enwere m mma n'ime ọnwa 3 naanị na m ga-esonyere ọgbakọ French. "
Jadim hụrụ ya n'anya nke ukwuu nke na o mere ka ọ bụrụ nọmba omenala 10 na ụlọ nkwonkwo ahụ mgbe ọ buru ụzọ nye ya nọmba 15 ahụ. Ebumnuche bụ n'ihi na ọ masịrị mmasị aka ekpe ya, ụzụ ya na ịba ụda. Bernardo mere ka 132 pụta maka Monaco, na-enyere Club ahụ aka na Nlekọta 1 Ligue na 2016 / 17.